June 2016 - Page 2 of 21 - Puntland Mirror Believable Media Website
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka cusub ee waxbarashada Soomaaliya Cabduqaadir Cali Xaashi ayaa maanta xilka la wareegay. Munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday xafiiska Raysulwasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay saraakiil dowlada katirsan oo uu kamid […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ibraahim Maxamed Maxamuud oo Boosaaso ka socda ayaa ku guulaystay tartanka Quraan akhriska ee gobolada Puntland. Madaxweynaha dowlada Puntland ayaa ka qaybgalay munaasabada lagu soo gabagabaynayay tartanka oo lagu qabtay masjidka al-Hudda […]
Garowe-(Puntland Mirror) Bosaso’s Ibrahim Mohamed Mohamoud wins Puntland Quran recitation contest in which competitors from Puntland regions took part. Puntland’s President Abdiweli Mohamed Ali has attended the concluding ceremony held in al-Huda mosque in […]
Laascaanood -(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhimatay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maanta oo Talaado ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka. […]
Las anod-(Puntland Mirror) At least two people have been killed and five others were wounded in a heavy clan fighting in Las anod town of Sool region on Tuesday, residents said. The battle between […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiir dowlihii hore ee arrimaha deegaanka Soomaaliya, Burci Maxamed Xamsa kaasoo lagu dilay weerar ay al-Shabab ku qaaday Sabtidii lasoo dhaafay huteel kuyaala Muqdisho ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Xamsa ayaa […]
Former Somali state minister for environmental issues laid to rest in Mogadishu
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali state minister for environmental issues, Buri Mohamed Hamza who was killed by al-Shabab militants during a raid on hotel in Mogadishu last Saturday was buried in Mogadishu. The funeral was attended […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamo gadoodsan oo katirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo dalbanaya mushahaar ayaa maanta oo Axad ah la wareegay waddooyinka waa-weyn ee caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay dadka deegaanku sheegeen. Ciidamada ayaa ka xanaaqsan muddo ka [...]